Akụkọ - Nnọọ na FIZA Teknụzụ
HEBEI FIZA TECHNOLOGY CO., LTD bụ igwe nrụpụta kemịkal zuru ezu na soplaya. Anyị nwere ọkachamara na mmepụta na mbupụ nke kemịkalụ nke a na-eji maka ọtụtụ ngwa dị na nri, fatịlaịza, nri, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ogige ọgwụgwọ mmiri, dị ka sodium chlorite, chlorine dioxide ntụ ntụ, chlorine dioxide tablet, chlorine dioxide gel, chlorine dioxide granular, lead nitrate, sulfamic acid, barium carbonate, strontium carbonate, barium nitrate, ọkụ nnwale crucible, ọkụ nnwale cupel, Anyị nkwa na usoro iwu nnabata na ọtụtụ ngwaahịa / ọkọnọ nzere usoro na-enye ndị ahịa anyị obi ike na ngwaahịa ha zụrụ ga-ezute ha chọrọ mgbe niile. HEBEI FIZA TECHNOLOGY CO na-elekwasị anya na igbo mkpa nke ndị ahịa anyị, na-enye ezigbo obodo anyị obodo ma na-echekwa gburugburu ebe obibi. Nke a na-enye ohere maka mmepe na ịga n’ihu ịga nke ọma maka kemịkal yana ndị ahịa anyị.
Companylọ ọrụ anyị nwere ọtụtụ alaka na ntọala ntọala niile na mba ahụ, na-enwe usoro nrụpụta tozuru oke nke kemịkalụ organic na ndị otu ọkachamara maka imepụta. Companylọ ọrụ anyị na-etinyekwa aka na ụlọ ọrụ kemịkal ruo ọtụtụ afọ, ọnụego mbupụ na-adịkwa mgbe niile na ụlọ ọrụ ahụ. Ugbu a ụlọ ọrụ ahụ enwetawo nnukwu arụmọrụ azụmahịa ma merie aha ụlọ ọrụ dị elu.
Anyị enweela ngwa ngwa na teknụzụ, ụzọ nyocha zuru oke na usoro mmesi obi ike, ihe karịrị 80% nke ngwaahịa anyị na-ebupụ ya na Europe, USA, South America, Mid East, South East Asia, ect.
"Jide àgwà ahụ site na ịchịkwa nzọụkwụ ọ bụla nke ọma, Meziwanye ọrụ ahụ site n'ijere ndị ahịa ọ bụla ozi nke ọma" bụ ịdị adị ogologo oge na ntinye aka anyị. Anyị abụghị naanị na-enye niile metụtara ngwaahịa, kamakwa na nke kacha mma ọnụahịa, elu oru na kasị mma ọrụ na-obi gị.
Anyị ji obi anyị niile na-atụ anya ịkwado gị, iji wulite ezigbo mmekọrịta nke develpoment na ọganihu nkịtị! Ọ bụrụ na ị nwere mkpa ọ bụla maka ngwongwo kemịkal, biko egbula ịkpọtụrụ anyị!